किन घट्दै छ नेप्से ,यी हुन मुख्य कारणहरु? - Rastrakokhabar
काठमाडौं,फाल्गुन १३ ,बिहिबार : सेयर बजारमा करेक्सन देखिएको छ । बजार नीतिगत परिवर्तन वा केही प्रमुख घटनाका कारण तल झरेको होइन । यो स्वभाविक करेक्सन भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसअघि धेरैले २५ सय विन्दुकै आसपासमा करेक्सन आउने अनुमान लगाएका थिए । तर नेप्सेले त्यसलाई पनि पार गरेर २६०० भन्दा पनि माथि गयो । सूचक माथि जाँदै गर्दा कतिपय अल्पकालीन लगानीकर्ता र ट्रेडरहरुले बेच्ने क्रम अघि बढाए ।
Previous Post	रिमा बिश्वकर्माले कहिले गर्लिन त बिवाह?
Next Post	कोभिड भन्दा तर्सिने संख्या घट्यो तर संक्रमित संख्या बढ्यो